Boqor caan ah oo Xabsi guri galiyay Walaalkiis kadib markii uu ka shakiyay !! | Allbanaadir.com
Home NEWS Boqor caan ah oo Xabsi guri galiyay Walaalkiis kadib markii uu ka...
Boqor caan ah oo Xabsi guri galiyay Walaalkiis kadib markii uu ka shakiyay !!
Boqortooyada Urdun ayaa xabsi guri galisay Amiirkii mar ahaan jiray dhaxal sugaha taajka boqortooyada Urdun Amiir Xamsa Bin Xuseen, kadib markii uu ku dhaqaaqay falal uusan jecleesan walaalkiis ka weyn Boqor Cabdalla.
Muuqaal uu soo duubay Amiir Xamsa Bin Xuseen, ayuu ku sheegay in la galiyay xabsi guri, waxa uuna ku eedeeyay Boqortooyada uu hogaamiyo walaalkiisa ay kala hooyada yihiin in dalka galiyay xaalad xun oo musuq maasuq iyo maamul xumo ah.
Amiirka xabsi guriga la galiyay ayaa la sheegay in uu kulamo la yeeshay hogaamiyaasha beelaha Urdun uuna ku dhaqaaqay talaabooyin Boqortooyada u aragto mid uu ku doonayo in dalka khalalaase ku galiyo.
“Waxaa booqasho iigu yimid taliyaha ciidanka Urdun saaka oo ii sheegay in aan la ii ogolayn in aan guriga ka baxo oo aan dadka la xidhiidho ama aan la kulmo sababta oo ah kulamo aan fadhiyey ayaa lagu dhaliilay boqorka”. ayuu yiri Amiir Xamsa.
Amiirka ayaa sheegay in 20-kii sano ee lasoo dhaafay maamulka Boqortooyada Urdun uu hareeyay maamul xumo iyo musuq maasuq, waxa uuna sheegay in Boqortooyada bilowday in ay caburiso dadka ka aragtida duwan.
“Anigu ma ihi qofka ka masuulka ah maamulka dumay, musuqa iyo karti darrada ka jirtay maamulka dalkeena 15 ilaa 20 sano ee u dambeeyey ee hadana ka sii daraya. Anigu kama mausul ihi in shacabku kalsooni ku qabi waayaan hay’adahooda dawladda, waxay arintu gaadhay meel aan qofna awoodin inuu hadlo ama uu aragtidiisa cabiro isaga oo aan ka baqayn in la handado, la xidho ama loo hanjabo” ayuu yiri Amiir Xamsa.
Khilaafka xoogan ee soo kala dhax galay Amiir Xamasa iyo Walaalkiis Boqor Cabdalla ayaa si weyn looga dareemay Boqortooyada Urudun, waxaana dhawaan dowlada xir xirtay amiiro iyo masuuliyiin kale oo xilal kasoo qabtay boqortooyada oo afgambi lagu eedeeyay.
Previous articleAskari katirsanaa Ciidamadii C/Rashiid Janan ku wareejiyay dowlada oo dil geestay
Next articleAl Shabaab oo Xukun dil ah ku fulisay labo nin oo kala geyn jiray lamaanayaasha is qaba